​Qaramada Midoobay oo ka hortimid xubno ku Jira Aqalka Sare
Qoraal kasoo baxay xafiiska Wakiilka Qaramada Midoobay ee Somalia, ayaa looga soo horjeestay Saddex Xubnood oo kamid ah Liisaska ay soo gudbiyeen maamullada dalka qaybtood.
Warqado rasmi ah oo ku saxiixanyahay Michael Keating ayaa ayaa loo diray maamullada Jubbaland, Galmudug iyo Puntland oo lagu wargaliyay in xubnaha kamid noqon shakhsiyaadka matalaya Aqalka Sare.
Xubnaha la diiday ayaa kala ah; Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid), Gen. Maxamed Siciid Xirsi (Moorgan) iyo Axmed Xaashi Maxamed.
Raggan ayaa lagu eedeeyay inay kasoo qayb galeen dagaallo ka dhacay dalka Somaliya bur-burkii dowladdii dhexe kadib.
Mid kamid ah xubnaha gaar ahaan Cabdi Qaybdiid, ayaa maanta la doortay, halka kuwa kale aysan hortagin dadkii codka u qaadi lahaa.
Warqad kamid ah qoraalada la diray oo helay Garowe Online, ayaa madaxweynaha Galmudug lagu wargaliyay in Qaybdiid uusan kamid noqon karin dadka matalaya Aqalka Sare maadama sida la sheegay lagu haysto dambiyo dagaal.
Qaybdiid ayaa horay usoo noqday Madaxweynaha Galmudug isagoo ka qayb gali jiray shirar caalami ah, lana kulmi jiray mas'uuliyiin katirsan Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa.
Majirin cid horay maxkamad u saartay dad loo haysto inay ku lug lahaayeen colaadahii Somalia ka dhacay.
Dhinaca kale Qaramada Midoobay horay uma soo saarin qaraar mamnuucaya in dadka noocaas ah ka qayb galaan siyaasadda Somalia.
Xubnaha la haysto ayaa qaybtood horay ayay uga fariisteen waxyaabaha lagu eedaynayo iyagoo qaybtood waqti hore dalka ugu dambaysay.
Weydiimo badan ayay dhalisay tallaabadan iyadoo siyaabo kala gadisan loo macneeyay, waxaana la saadaaliyay inay carqalad ku noqon karto qorshaha aan cagaha badan ku taagnayn ee lagu doonayo inay doorasho uga dhacdo Somalia.
Majirto wax war ah oo kasoo baxay maamullada loo gudbiyay qoraalkan kasoo baxay Qaramada Midoobay.
​Maamullo lagu celiyay liiska Aqalka Sare ee ay soo gudbiyeen [Akhriso]
Soomaliya 10.10.2016. 14:28
MUQDISHU, Somalia- Guddiga doorashooyinka dadban ee Somalia ayaa dib u celiyay liiska xubnaha Aqalka Sare oo ay soo gudbiyeen maamullada dalka qaybtood, waxayna sheegeen inaan la waafajin hishiisyadii madasha.
Maamullada Puntland, Jubbaland iyo Galmudug, ayaa la ...
Maxamad Siciid Moorgan oo looga adkaadey kursigii aqalka sare
Puntland 20.10.2016. 15:22
​Prof: Maxamed Cabdi Gandi oo looga adkaaday doorashada Aqalka Sare Jubbaland
Puntland 19.10.2016. 15:50
​Puntland: Murashaxiinta Aqalka Sare oo khudbado jeediyay [Sawirro]
Puntland 19.10.2016. 12:48
Puntland: Yaasin Cabdi Seed oo ka tanaasulay xubinta Aqalka Sare
Puntland 15.10.2016. 14:43
​Jubbaland iyo Galmudug oo soo saaray liiskooda Aqalka Sare
Soomaliya 09.10.2016. 11:29
Musharax Cali Xaaji oo ka maqan Liiska musharaxiinta aqalka sare ee Barlamanka Somalia
Puntland 09.10.2016. 00:30